एनसेलले ल्यायो नयाँ वर्षमा नयाँ आकर्षक अफरहरू
मंगलबार, असार २१, २०७९ ०८:२३:२१ युनिकोड
काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०७९ को अवसरमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आकर्षक न्यु इयर कम्बो अफर र रिचार्ज योजना ल्याएको छ ।
यी अफर आइतबारबाट, सञ्चालनमा आएका छन् । यस आकर्षक न्यु इयर कम्बो प्याकअन्तर्गत ग्राहकले सात दिन र २८ दिन समयसीमा रहेका विभिन्न प्याक सुचारु गर्न सक्छन् । प्याकअनुसार ग्राहकले अल नेट भ्वाइस, अल टाइम डेटा, अल नेट एसएमएस र ननस्टप अन नेट भ्वाइस सेवाजस्ता आकर्षक सेवा बन्डलिङबाट फाइदा लिन सक्छन् । त्यस्तै, रिचार्ज योजनाअन्तर्गत प्रत्येक ग्राहकले ५० वा सोभन्दा बढीको हरेक रिचार्जमा बोनसस्वरूप फेसबुक, टिकटक, युट्युब प्रयोग गर्न सोसल मिडिया प्याक प्राप्त गर्दछन् ।
कम्बो प्याकअन्तर्गत सात दिनको समयसीमा रहेको प्याक ग्राहकले करसहित मात्र ९६ रुपैयाँमा सुचारु गर्न सक्छन् र यस प्याकमा बन्डल गरिएको १ जीबी अल टाइम डेटा र कुनै पनि नेटवर्कमा कल गर्न सकिन १ सय मिनेट अल नेट टक टाइमबाट फाइदा लिन सक्छन् । त्यस्तै, ग्राहकले १ सय ६८ रुपैयाँमा ५ जीबी अल टाइम डेटा र १ सय मिनेट अल नेट टक टाइम रहेको अर्को सात दिने प्याक मात्र १ सय ६८ रुपैयाँमा सुचारु गर्न सक्छन् । ग्राहकका लागि २८ दिन समयसीमा रहेको प्याक पनि रहेको छ जसअन्तर्गत ग्राहकले २ सय ९८ रुपैयाँमा २.५ जीबी डेटासँगै २ सय ५० मिनेट अल नेट टक टाइमको फाइदा लिन सक्छन् । यो प्याक सुचारु गर्न इच्छुक ग्राहकले एस्ट्रिक्स१७१२३एष्ट्रिक्स१ह्यास डायल गरी यो प्याक सुचारु गर्न सक्छन् ।
कम्बो प्याकअन्तर्गत नै विशेष प्रिपेड ग्राहकका लागि धेरै डेटा भोलुमसहित २८ दिन समयसीमा रहेको अन्य दुई प्याक पनि रहेका छन् । ७ सय ९८ रुपैयाँमा एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले हरेक दिन १ जीबी डेटासहित ननस्टप अन नेट कल सुविधा (५ हजार मिनेटको फेयर युसेज पोलिसीअन्तर्गत रही), ५० मिनेट अफ नेट टक टाइम र १ सय अल नेट एसएमएसको फाइदा लिन सक्छन् । यस्तै २८ दिने प्याकमा रहेको अर्को योजनामा ग्राहकले मात्र ९ सय ९८ रुपैयाँमा हरेक दिन २ जीबी डेटा २८ दिनसम्म, एनसेल नेटवर्कभित्र ननस्टप कल सुविधा, १ सय मिनेट अफ नेट टक टाइम र २ सयवटा अल नेट एसएमएस पाउँछन् ।
यसका साथै रिचार्ज योजनामा ग्राहकले ५० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको हरेक रिचार्जमा सोसल मिडिया डेटा प्याक प्राप्त गर्दछन् । ५० देखि ९९ रुपैयाँ रिचार्ज गर्ने ग्राहकले १ दिनको समयसीमा रहेको ५० एमबी सोसल प्याक प्राप्त गर्दछन् । त्यस्तै, १ रुपैयाँदेखि १ सय ९९ रुपैयाँको रिचार्जमा ग्राहकले तीन दिनको समयसीमा रहेको २ सय एमबी सोसल प्याक र २ सय वा सोभन्दा बढीको रिचार्जमा ग्राहकले सात दिनको समयसीमा रहेको ५ सय एमबी सोसल प्याक पाउँछन् । यसरी बोनसमा पाइने सोसल प्याकको डेटा ग्राहकले फेसबुक, टिकटक र युट्युब चलाउन प्रयोग गर्न सक्छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २८, २०७८, ०६:३२:००
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य: कति छ आज ?
सरकारले ट्याक्सीको भाडा पनि बढायो, नयाँ भाडादर यस्तो
बुधबार, चैत २३, २०७८ जनता नेपाल
नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको भाउ तोलामा ३ सय रुपैयाँले घटेर ९८ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि मंगलबार सुन तोलाको ९८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । पुरा पढ्नुहोस्
आजबाट लागुहुने गरि निगमले बढायाे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कुनकाे कति पुग्याे ? (बिज्ञप्ति)
नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगम संचालक समितिको बैठकले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरेर पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँको दरले बढाउने निर्णय गरेकाे हाे । पुरा पढ्नुहोस्